Sida loo keydiyo batteriga ku jira Android inta aad isticmaaleysid WiFi | Androidsis
Sida loo isticmaalo batteriga ka yar Android inta aad isticmaaleysid WiFi
Eder Ferreno | | Batariga, Tababarada
Batariga ayaa ka mid ah dhinacyada abuuraya walaaca ugu badan ee ka dhex jira dadka isticmaala Android. Waa muhiim in ismaamulkiisu ku filan yahay maalinta oo dhan. Xaalado badan, waxaan adeegsan karnaa tabaha naga caawinaya inaan keydinno xoogaa batteri ah ama aan u isticmaalno si hufan. WiFi, oo la yaab leh sida ay u muuqato, ayaa naga caawin kara kiiskan.
Halkan waxaan idinkaga tagnay tilmaamo waxtar noo yeelan doona. Waad arki kartaa sida waxaan ku keydin karnaa batteriga adoo adeegsanaya WiFi. Tan iyo inkasta oo xaqiiqda ah in xaalado badan aan ku xirno shabakadda bilaa-waayirka ah si aan u shaqeyno, waxaan ku sameyn karnaa hab wax ku ool ah.
Sidan oo kale, xitaa haddii aan ku xirno shabakad adeegsaneysa taleefankayaga Android, ma isticmaali doonno tamar ka badan intii loo baahnaa. Markaa waxaan ku fulin karnaa howlaha aan u baahanahay, laakiin anaga oo aan ku soo darin isticmaalka badan taleefankeena. Maxaan sameyn karnaa
1 Disable WiFi hurdada
2 Adeegso shabakadaha WiFi 2,4 GHz
3 Jooji ogeysiiska jira
Disable WiFi hurdada
Mid ka mid ah dariiqooyinka ugu fudud ee lagu keydin karo batteriga taleefankaaga Android mahadnaqa WiFi waa gab shabakad inuu seexdo. Sidan oo kale, waan iska ilaalin karnaa isku xirnaanta noocaas ah. Habka loo joojiyo waa runti fududahay, maadaama aan ikhtiyaarkan ku haysanno dejinta aaladdayada. Marka laba tallaabo ayaan ku dhamaynaynaa dhammaantood.
Waxaan tagnaa goobaha taleefanka waana inaan tagnaa qeybta WiFi ee taleefankeena dhexdiisa. Kadib waa lagama maarmaan in la aado goobaha WiFi. Waxaan arki doonaa in mid ka mid ah xulashooyinka taleefanka ay tahay WiFi u isticmaal hurdada. Waxaan gujinnaa, ka dibna waxay na siinaysaa dhowr ikhtiyaar, mid ka mid ah oo ah "weligiis." Waa inaanu waligeen dooran.
Marka sidaas la sameeyo, waan ka hortageynaa shabakadu way sii shaqeyn doontaa marka taleefankeena Android, ama kaniiniga, uu seexdo. Wax naga caawin doona inaan si fudud u keydiso batteriga.
Adeegso shabakadaha WiFi 2,4 GHz
Waxaa laga yaabaa inaad ogaatay in markaan ku xirno WiFi oo aan helno liiska xiriirada la heli karo, waxaan leenahay dhowr nooc oo xiriir ah. Waxay sidoo kale na tusayaan qaab kale, tan iyo waxaa jira isku xirnaanta 2,4 GHz iyo kuwo kale oo muujinaya 5 GHz. Farqiga ugu weyni waxa weeye in kuwii hore u muuqdaan kuwo xoogaa gaabis ah, sababtoo ah soo noqnoqodkooda oo hooseeya.
Laakiin isticmaalka iyaga ka mid ahi waa wax ina siin kara xoogaa faa'iido ah, sida xaaladdan ku jirta isticmaalka batteriga. Tan iyo markii lagu xidhayo shabakad 2,4 GHz ah waxay isticmaashaa batteri ka yar shabakadda 5 GHz. Waa faa'iidada ugu weyn ee noocan ah isku xirnaanta ay na siiso. Sidaa darteed, qaar ka mid ah weydiimaha gaarka ah, waxaa laga yaabaa inay aad noo anfacdo, maadaama ay ka waxtar badan tahay.
Caqli ahaan, haddii xiriirku aad u gaabis yahay ma aha wax inna magdhaba. Laakiin haddii aan aragno in xawaaraha isku xirnaantaadu yahay mid la aqbali karo, oo noo oggolaaneysa inaan fulino howlaha aan dooneyno ama aan u baahan nahay, waa lagu talinayaa. Tan iyo markii aan ku badbaadin doono xoogaa batari taleefankeena Android.
Jooji ogeysiiska jira
Isticmaalayaal badan ayaa badanaa gab ogeysiisyada qaarkood sida hab lagu keydiyo tamarta loona yareeyo tirada howlaha taleefankaaga Android. Sidaa darteed, khiyaanadan ugu dambeysa ma noqon doonto mid aad loola yaabo ama cusub. Waana laga yaabaa xitaa inay qaar idinka mid ahi ogaadaan. Laakiin sidoo kale waxay u muuqataa mid fudud oo caawin u noqon kara batteriga.
Markaan WiFi ku shaqeyno taleefanka, Waxaan helnay ogeysiis caan ah oo sheegaya in ay jiraan hal ama dhowr shabakado oo la heli karo. Waxaan ka shaqeyn karnaa si aan si fudud ugu keydinno batteriga qaarkood. Waxa ay tahay inaan sameyno waa inaan aadno goobaha taleefanka ee WiFi. Halkaa ayey ku taal meesha aan ka heli karno suurtagalnimada in laga fogaado in si otomaatig ah naloo ogeysiiyo.
Habkani waa mid toos ah, waxaana loo isticmaali karaa cabir dheeraad ah. In kasta oo saameynta ay ku yeelan karto batteriga ay aad uga yar tahay tan labada kale ee aan kor kuugu soo sheegnay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Batariga » Sida loo isticmaalo batteriga ka yar Android inta aad isticmaaleysid WiFi